Iindaba -I-Evaporative Condenser
I-condenser evaporative iphuculwe ukusuka kwinqaba yokupholisa. Umgaqo wokusebenza kwawo ngokusisiseko uyafana nalowo wenqaba yokupholisa. Oku ikakhulu iqulunqwe umzimba sokufudumeza, inkqubo ukujikeleza kwamanzi kunye nenkqubo fan. I-condenser ye-evaporative isekwe kukuncipha komphunga kunye notshintshiselwano ngobushushu. Inkqubo yokuhambisa amanzi ngaphezulu kwe-condenser ngokuqhubekayo ifafaza amanzi okupholisa ezantsi ukuze enze ifilimu yamanzi ngaphezulu kwetyhubhu yokutshintshisa ubushushu, Unaniselwano lobushushu olunengqiqo lwenzeka phakathi kombhobho wokutshintshisa ubushushu kunye nolwelo olushushu kumbhobho, kunye nobushushu idluliselwe emanzini okupholisa ngaphandle kwetyhubhu. Kwangelo xesha, amanzi okupholisa angaphandle kwetyhubhu yokutshintshisa ubushushu axutywe nomoya, kwaye amanzi okupholisa akhupha ubushushu obufihlakeleyo bomphunga (eyona ndlela iphambili yokutshintshiselana ngobushushu) emoyeni wokupholisa, ukuze ubushushu beqondo lomoya ulwelo lusondele kubushushu bebhalbhu emanzi emoyeni, kwaye ubushushu bayo bokujiya bunokuba yi-3-5 ℃ ngaphantsi kunaleyo yenkqubo yokupholisa amanzi apholileyo kwinqaba epholileyo.
1.Ukusebenza kakuhle kokuncipha: ubushushu obukhulu bokungabikho komphunga, ubushushu obuphezulu bokudlulisa ubushushu bokubuyela umva komoya kunye nefriji, isivuseleli somphunga sithatha iqondo lobushushu bebhalbhu emanzi njengamandla okuqhuba, sisebenzisa ubushushu obufihlakeleyo bokukhupha umphunga wamanzi kwifilimu kwikhoyili ukwenza amaqondo obushushu amafu kufutshane neqondo lobushushu lebhalbhu emanzi emanzi, kwaye ubushushu bawo be-condensation unokuba yi-3-5 ℃ isezantsi kunaleyo yenkqubo yokupholisa amanzi apholileyo nenqaba kunye ne-8-11 ℃ esezantsi kunaleyo yomoya opholileyo, ophungula kakhulu ukusetyenziswa kwamandla kwesiguquli, Umlinganiselo wokusebenza kwamandla kwenkqubo inyuswe nge-10% -30%.
2. Ukonga amanzi: ukufudumeza okufudumeleyo kobushushu bamanzi kusetyenziswa ukutshintshiselana ngobushushu, kunye nokusetyenziswa kwamanzi okujikelezayo kuncinci. Ukujonga ukubethwa kwelahleko kunye nokutshintshiselana ngamanzi amdaka, ukusetyenziswa kwamanzi akukho-5% -10% yento epholileyo yamanzi.
3. Ukonga umbane
Iqondo lobushushu lokujiya kwe condenser evaporative lilinganiselwe ngumoya webhalbhu emanzi, kwaye iqondo lobushushu lebhalbhu emanzi ngokubanzi yi-8-14 ℃ isezantsi kuneqondo lobushushu bebhalbhu eyomileyo. Idityaniswe nendawo enoxinzelelo olubi ebangelwa li fan ephezulu yecala, iqondo lobushushu lokunciphisa liyaphantsi, ke umlinganiselo wokusetyenziswa kwamandla wecompressor usezantsi, kwaye ukusetyenziswa kwamandla kwe fan kunye nempompo yamanzi ye condenser iphantsi. Xa kuthelekiswa nezinye izinto ezihambisa umbane, i-evaporative condenser inokonga i-20% -40% yamandla.
4. Ixabiso eliphantsi lotyalo-mali kunye nokusebenza: i-evaporative condenser inesakhiwo esihambelanayo, ayifuni nqaba yokupholisa, ihlala kwindawo encinci, kwaye kulula ukuyila iyonke ngexesha lokuvelisa, nto leyo ebangela ukuba kube lula ukufakela kunye nokugcina.